Ity fakan-tsary manisa People ity no vokatra kintarinay. Napetraka tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Shanghai Pudong. Nitafa tamin'ny TV Shanghai ihany koa ary nantsoina ho teknolojia mainty, ity ny horonantsary ho an'ny vaovao:
Betsaka amin'ny antsika Manisa fakan-tsary ny olonadia vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana anao amin'ny antsipiriany momba ny anay Manisa fakan-tsary ny olona.
HPC008 Manisa fakan-tsary ny olona dia mitovy amin'ny Hikvision Manisa fakan-tsary ny olona, fa MRB Manisa fakan-tsary ny olona manana tombony samihafa amin'ny Hikvision Manisa fakan-tsary ny olona. Mampiasa rafitra statistikan'ny fivezivezena mpandeha an-tserasera izy hanatanterahana ny fanadihadiana statistika marina momba ny angon-drakitra fifamoivoizana ao amin'ny magazay, izay afaka manisa ny fivarotana marina. Ny fampahalalana toy ny isan'ny olona miditra sy mivoaka isaky ny varavarana sy ny làlan'ny fivezivezin'ny olona dia manana ny mampiavaka azy ny fahaiza-mampifanaraka, ny fahamendrehana avo ary ny vidin'ny fandidiana ambany. Ny famakafakana statistikan'ny mpandeha mahery sy ny asany fitantanana dia afaka manome tatitra am-polony ho an'ny mpanjifa, ary mampifangaro rafi-rindrambaiko antoko fahatelo mba hanomezana fanohanana ara-tsiansa bebe kokoa an'ireo mpanapa-kevitra. Tsy toy ny HikvisionManisa fakan-tsary ny olona, MRB Manisa fakan-tsary ny olonamanana teknolojia fototra efatra, dia ny teknolojia fanarahan-dàlana, ny haitao momba ny tontolo iainana, ny haitao momba ny olombelona ary ny haitao. Amin'ny alàlan'ny famakafakana ny angon-drakitra momba ny fivezivezena amin'ny fidirana sy ny fivoahan'ny toerana tsirairay, dia fizarana sahaza izany, manome fandaharam-potoana azo antoka ny fandaharam-potoana siantifika sy ny antoka azo antoka. Ny ora fiasana mety dia azo apetraka arakaraka ny fivezivezan'ny mpanjifa, ary ny isan'ny olona dia azo apetraka ao anatin'ny toe-javatra manokana hiara-miasa amin'ny rohy fanairana. MRB Manisa fakan-tsary ny olona dia natao indrindra ho an'ny toeram-pivarotana sy ny antsinjarany Manomeza fanohanana serivisy fandinihana ho an'ny magazay fivarotana rojo, fisarihana olona, ​​efitrano fampiratiana, fitateram-bahoaka ary toerana be olona.
Ny asan'ny HPC008 Manisa fakan-tsary ny olona
1. Ny angona azo avy amin'ny Manisa fakan-tsary ny olona natambatra tamin'ny varotra, ary avy eo azo refesina ny tahan'ny fividianana.
2. Ny fivezivezena amin'ny mpandeha roa dia voaisa tsara, ny isan'ireo mpandeha dia isaina, voahaja ny fenitra ary mivelatra ny halavirana.
3. Fantaro amin'ny fotoana tena izy ny isan'ny olona isaky ny gorodona amin'ny alàlan'ny HPC008 Manisa fakan-tsary ny olona.
4. Ny fiovana amin'ny fivezivezin'ny mpandeha anatiny ao amin'ny magazay sy ny fivezivezin'ny mpandeha antonony.
5. Fotoana onenan'ny mpitsidika.
6. Ny tahirin-tsofin'ny mpandeha nangonin'ny HPC008 Manisa fakan-tsary ny olona hitrandrahana lalina, ary avy eo hampidirina sy hofakafakaina ny angona.
7. Tatitra momba ny angon-drakitra mpandeha, karazana intuitive sy diversified.
8. Aorian'ny fametrahana ny HPC008 Manisa fakan-tsary ny olona isaky ny toerana misy ny fivarotana dia azonao atao ny manisa ny hakitroky ny fivezivezena ao anaty magazay, manadihady angona avy amin'ny lafiny maro, ary manombatombana ny fironana amin'ny fivezivezin'ny mpandeha.
9. Manisa ny isan'ny olona tafahitsoka ao amin'ilay toerana.
10. Ny rindrambaiko an'ny HPC008 Manisa fakan-tsary ny olona afaka manao fanaraha-maso fonenana.
Ny haavon'ny tsikera, nanoro hevitra ny hisafidy solomaso lehibe
Ity valin'ny fitsapana ity dia miankina amin'ny olona 1,7M eo ho eo
Mahamarina ny sakany 2M
Ny olona MRB manisa horonantsary HPC008 fakantsary
Manana karazana maro isika Manisa fakan-tsary ny olona, 2D, 3D, AI Manisa fakan-tsary ny olona, misy hatrany izay mety aminao, azafady mba mifandraisa aminay, hanoro ny mety indrindra izahay Manisa fakan-tsary ny olona ho anao ao anatin'ny 24 ora.
Teo aloha: Fakan-tsary MRC010 lohan'ny loha manisa